Hagaaji qaladka Samba 255 (Wadaagista Faylka) | Laga soo bilaabo Linux
Hagaaji qaladka Samba 255 (Wadaag Folder)
Marka horeba, waa maxay qaladka Samba 255? Hagaag, waa qaladka aan helno marka aan gudaha galno Ubuntu (tusaale ahaan), waxaan isku dayeynaa inaan wadaagno fayl mana awoodno maxaa yeelay wuxuu noo sheegayaa:
"Shabakada wadaag" waxay soo celisay qalad 255: net usershare: ma furi karto isticmaaleyaasha hagaha / var / lib / samba / usershares. Ogolaanshaha Cilad Ladiiday Ma lihid ogolaansho aad ku abuurto isticmaale wadaag. Weydii maamulahaaga inuu ku siiyo rukhsad si loo abuuro qayb.
Tani waxay igu dhacday aniga markii aan isku dayay inaan ku abuuro galka la wadaago mid ka mid ah kombiyuutarradayda adeegsadayaasha ah, si aan si raaxo leh ugu beddelan karo feylasha mishiinka meheradda leh ee Windows XP oo socda Waalidka.
Marka laga hadlayo Ubuntu xalka waa fududahay, maxaa yeelay wax walba waxaan ku xaliyay anigoo ku fulinaya xarunta:
sudo chmod 777 /var/lib/samba/usershares
Laakiin tani ma noqon karto xalka kuwa kale. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo Debian si fudud ayaa loo xallin karaa sidoo kale iyadoo lagu daro adeegsadeheena kooxda sambashare.
# addgroup usuario sambashare
Waxay ii sheegeen oo kaliya xildhibaanka in xalka kale ee suurtogalka ah uu kudarsanayo feylka /etc/samba/smb.conf halbeegga: usershare milkiilaha kaliya = Been
Laakiin aan dhahno waxaan rabnaa wax intaas ka badan. Xaaladdan oo kale ma dooneyno inay na weydiiso username iyo lambarka sirta ah si aan ugu helno galka la wadaago. Waa hagaag, tan, waxa aan sameyno waa inaan ka abuurno galka / warbaahinta:
# mkdir /media/compartir
# chmod -R 777
Ka dibna waxaan ku darnaa dhamaadka faylka /etc/samba/smb.conf:
[dukumiintiyo] faallo = dokumentiyada la wadaago waddada = / warbaahinta / la wadaaga dadweynaha = haa qoris = haa
Waa hagaag, xaaladaha qaarkood waa inaan dib u bilownaa Samba:
Hadda, ka mashiinka dalwaddii waa inaan galiyaa Windows Explorer:
Oo waa diyaar ..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Hagaaji qaladka Samba 255 (Wadaag Folder)
Qaabka labaad waa midka saxda ah. Ubuntu waa inay jirtaa koox sidoo kale, waxay u badan tahay in buugga uusan ka tirsanayn kooxda sambashare ama wax ka maqan smb.conf.
Arrinta oggolaanshaha ee 777 waxay soo saartaa dhibaato xagga amniga ah, waxaa fiican in marmar loo adeegsado si loo xaqiijiyo inay shaqeyneyso, laakiin, markii la xaqiijiyo, u gudub si aad u hagaajiso kooxaha iyo / ama faylka qaabeynta samba.
Ku jawaab archeando
Waad saxan tahay oo ku saabsan 777, laakiin fikradda ayaa ah in "Qof walba" uu heli karo galkaas si uu u qoro / u tirtiro / nuqul / u dhaqaaqo 😉
waad salaaman tahay Elav !!!. Xalkaas ayaa ah wadaagga shabakadda guriga ama aan u baahnayn nabadgelyo. Waxay aad ugu egtahay markay ku jirto Windows XP, adoon kumbuyuutar ka diiwaan gashanayn Domain, waxaan dhahnaa Faylka Wadaag waa la shaqeeyay waxaanan dhahnaa Qofkasta wuu qori karaa ama akhrin karaa kheyraadka la wadaago Sidaa darteed, amni ma jiro.
Sikastaba, taxanaha Samba waxaa waajib igu ah inaan u hibeeyo hal ama in ka badan maqaalo si aan ula wadaago galka iyo madbacadaha. Laga soo bilaabo shabakad guri illaa server fayl leh dhammaan sharciyada.
Waxaan idinka codsanayaa inaad ka samirtaan arrintan, maadaama sharraxaadda Samba aysan sahlaneyn. 🙂
Xaqiiqdii, Samba wax badan ayey ii anfacaysaa aniga tan iyo markii aan isticmaalo faylalka la wadaago waxaanan doorbidaa inaan ka fogaado dhibaatooyinka xagga qaabeynta si aan ula wadaago fayl.
mahadsanid, maqaalkani wuxuu ku imaan doonaa khalad uu Samba i siinayo markii aan isku dayayo inaan la wadaago faylka Dadweynaha: D.
Mar kasta oo aan isku dayo inaan faallo ku dhajiyo Samba: SmbClient wuxuu i siiyaa qaladka soo socda:
Aaga 404 maadan helin waxaad raadineysay!
Waxaa macquul ah inaad raacday xiriir qaldan ama aad raadineyso dukumiinti wax ka beddelay cinwaanka. Ku noqo bogga guriga ama isticmaal mashiinka raadinta ee kore si aad u hesho meel cusub oo aad aado. Ama waxaad marin ka heli kartaa xiriiriyeyaal kale oo xiiso leh si aad u hesho waxa aad raadineyso, tusaale ahaan:
Waad salaaman tahay, waxaan ku dalbaday rukhsado chmod -R 777 diiwaanka la wadaago iminkana iima ogola in aan galo, waxay iga tusaysaa galka Windows ka laakiin markaan rabo inaan galo waxay ii sheegaysaa ogolaansho la diiday, sida loo xaliyo tan?
adrian ahaa dijo
Sii wax isku mid ah laakiin gadaal ah chmod -R 777 (wax yar ayaa ah in laga saaro rukhsadaha)
chmod + R 777 diiwaanka si aad u dejiso rukhsadaha
Jawaab adrian aaae
JORGE FRANCISCO JUAREZ ZUÑIGA dijo
Galab wanaagsan qof walba, waxaan u baahanahay caawinaad:
Waxaan isku dayayaa in aan ku xiro laba kombuyuutar shabakad Ubuntu ka dib isku dayo badan ka dib waxaan awooday inaan rakibo samba waxayna ka muuqataa launcher iyo ka dib markii aan isku duba riday koox cusub oo labada PC ah oo aan la wadaago fayl waxay ii soo direysaa qaladkan. cadee inaan sameeyay halmar mar, laakiin markii aan dib u bilaabayay kumbiyuutarada ma ixtiraamayo galka la wadaago oo raba inaan dib u wadaago waxay ii sheegtaa tan) «Tijaabada tijaabada samba waxay soo celisay qalad 1: Load smb config files ka / iwm / samba /smb.conf
rlimit_max: kordhinta rlimit_max (1024) ilaa xadka ugu yar ee Windows (16384)
digniin: In la iska indhatiro qiimaha 'saamiga' aan sax ahayn ee loo yaqaan 'amniga' adeegyada xamuulka ee khaladaadka
Jawaab JORGE FRANCISCO JUAREZ ZUÑIGA
Masiixiyiin ORTIZ dijo
haa habkaas ayay iigu adeegtay NVIDIA JETSON TK1
net usershare 'khaladka la soo celiyey 255: net usershare: ma furi karo usershare tusaha / var / lib / samba / usershares. Ogolaansho Cilad ah looma diidin Fasax uma lihid inaad abuurto isticmaale wadaag. Weydii maamulahaaga inuu ku siiyo rukhsad si loo abuuro qayb.
Kujawaab Masiixi ORTIZ
Sida loo ilaaliyo arimahaaga gaarka ah internetka